Shinda yezvigadzirwa zve DIY
Polyester / donje / acrylic / shinda shinda dzinorukwa dzinowanikwa mumhando dzakasiyana siyana dzemavara uye ukobvu kubva kutete kusvika kune yakanyanya chunky. Rudzi rwe acrylic yarn zvinosanganisira shinda zhinji dzepakutanga dzinosanganisira simbi, pom-pom, frizzy uye dzakamonana yarn.
Inokodzera mapurojekiti akasiyana siyana anosanganisira zvipfeko zvevana, zvipfeko, magumbeze, makushoni, matoyi, ngowani, masherefu uye magirovhosi. Zvinhu zvakagadzirwa kubva kune acrylic yarn zvinogona kushambidzwa uye zvakagadzikana pakanangana neganda rako.
100% refu staple donje shinda ine akazara siyana mavara uye kuverenga, kusanganisira crochet thread, chinjikira musono shinda, etc. Aya pearl donje shinda mabhora akapfava, silky, colorfast uye haana fluff kana kink.
Inokodzera kugadzira akasiyana zvinhu, mapatani, mapurojekiti uye zvishongedzo zvinosanganisira doilies, zvakaomeswa mhuka, magumbeze evana, zvidhori, runhare mbozha, kiyi yekiyi uye zvimwe zvakawanda zvipo.
Tine shinda yekusonesa nayo polyester kusvina thread, embroidery thread, goridhe kana sirivheri shinda yesimbi, naironi inoonekera chena kana nhema shinda.
Inokodzera kusona nemaoko, kusona muchina, muchinjiko, DIY, embroidery, kurukwa, kuruka nezvimwe!